နောင်ဂျိန်တို့ မိသားစု: ကြွေပါသော်လည်းမွှေး
သတိ - အရေးအသား အနည်းငယ်ကြမ်းပါသည်။
ကုမုဒြာကြာဆိုတာ ... ညအခါလရောင်သာပါမှ ... ပွင့်တယ် ...
ညမွှေးပန်းလေးတွေကတော့ ... ညနက်လေ ... မွှေးလာလေပါပဲ ...
ကျွန်မကတော့ ... ကုမုဒြာအိပ်မက် ... မမက်ရဲပေမယ့် ... ညမွှေးပန်းလေးလို့တော့ ... စိတ်ကူးယဉ်မိတယ် ...။
ကျွန်မတို့အတွက် ... စပ်ဆိုထားတဲ့ ညမွှေးပန်း သီချင်းလေးတောင် ...ရှိသေးတယ်မဟုတ်လား အကိုရယ် ...။
ကျွန်မဘဝ အကြောင်းလား ... စုံလို့ပါ အကိုရယ် ... အားလုံးကိုခြုံပြောရရင်တော့ ... ဘဝပေးမကောင်းဘူးပဲဆိုပါတော့လေ ...။
အဖေက ဆုံး ... အမေ ဘယ်မှာမှန်းမသိ ... အကိုကထောင်မင်းသား ...
ကျွန်မကတော့ ပြည့်တန်ဆာပေါ့ အကိုရယ် ...။
ကျွန်မ နာမည်လား ... ဟဟဟ ... ဒါလည်း အစုံပဲအကိုရေ ...
ရှိသမျှပန်းနာမည်တွေ ... မြစ်နာမည်တွေ ... အကုန်ကျွန်မပဲပေါ့ ...။
တစ်ခါတစ်ခါ ကိုရီးယား ဂျပန် နာမည်လေးတွေတောင် ပေးလိုက်သေးတယ် ...။
ဟဟ ... အလုပ်ထဲမှာဆိုတော့ ဒီလိုပဲ အကိုရဲ့ ...။
သြော် ... အကိုရယ် ... ကျွန်မက ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေတတ်သူပါ ...။
အမြဲတန်းပြုံးနေရသလို ... တစ်ခါတစ်ခါလည်း ရယ်မောပစ်လိုက်ရတာပေါ့ ...။
ဟုတ်မဟုတ်တော့မသိဘူး ... ရယ်မောချင်းဆိုတာ အသက်ရှည်စေတယ်လေ ...။
ပြည့်တန်ဆာဖြစ်နေရတဲ့အထဲ နေ့တိုင်းငိုနေရရင် သွားပြီပေါ့ ...။
ဒါပေမယ့်လည်း ... တစ်နေ့တစ်နေ့ ... နာရီတိုင်း စက္ကန့်တိုင်းမှာ ...
နေ့ဆိုတာတွေက ပျောက်ဆုံး ပျက်သုဉ်း ... ညတွေညတွေပဲ ဘဝတွေဖြစ်ခဲ့ရ ...
သန်းခေါင်ယံတွေကိုပဲ အဟာရအဖြစ် စားသုံးခဲ့ရသူပါ အကိုရယ် ...။
ယောက်ျားဆိုတာ ကျားတဲ့လား အကိုရဲ့ ...။
အဲဒီကျားတွေပဲ ကျွန်မတို့ရဲ့ အထိ အတွေ့ အယုအယအောက်မှာ ဝပ်ဆင်းသွားကြတာပါပဲ ...။
တစ်ကယ်တော့ ကျားတွေက ချစ်စရာပါ ... ရမ်းကားတဲ့သူပဲ မုန်းဖို့ကောင်းတာပါ ...။
မိန်းမဆိုတာက နူးညံ့မှကြိုက်တာလေ ... နော် ... အကိုရဲ့ ...။
ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်း ရမ်းရမ်းကားကားနဲ့ အစားကျူးတဲ့ ကျားဘီလူး တွေကိုတော့ ရှောင်တယ် ...။
မတတ်သာလွန်းမှ တစ်ကြိမ် တစ်ခါပါပဲ ...။
ကျွန်မ ဒီဘဝရောက်တာလား ...
အင်း ... မှတ်မှတ်ရရ ... တစ်ခုသော ဒီဇင်ဘာ ... (၁၆) နှစ် ပြည့်ကာစပေါ့ အကိုရယ် ...။
အဲဒီတုန်းက ပေါက်ဈေးကတော့ ဖလန်းဖလန်းပဲ အကိုရဲ့ ...
သိတယ်မလား ... ဒီအရွယ်နဲ့ အသစ်ဆိုတော့ ...။
ပါကင်ဆိုတော့ လိုချင်လွန်းလို့ ဝိုင်းတောင် အလုခံရတဲ့ အခြေအနေ ...
အဲသလို စင်ပေါ်မှာနေပြီး ဟိုးအောက်ဆုံးကိုရောက်အောင် လမ်းဖေါက်ခဲ့တာ ကျွန်မပေါ့ ...။
အခုမှ ကျွန်မအသက် (၁၉) နှစ် ... သန်တုန်း မာတုန်း ... လှတုန်း ပတုန်း ... တောင့်တုန်း ဖြောင့်တုန်း ပါပဲ ...။
(၃) နှစ်ဆိုတဲ့ကာလ ... သန်းခေါင်ယံညတွေမှာ ... ကျားမှန်သမျှ ယုန်ဘဝ ပြောင်းပေးခဲ့တာ ...
ကျွန်မပဲပေါ့ အကိုရယ် ...။
သစ္စာတွေ မေတ္တာတွေ ဟုတ်လား အကို ... အချစ် ... ဟဟဟ ... အချစ်တဲ့လား အကို ...။
လှပါတယ် ... တစ်ကယ်ပါ ... စကားလုံးတွေပါ ...။ လူတွေက ဒီစကားလုံးတွေနဲ့ပဲ ... ဟန်ဆောင် လှည့်ဖြားနေကြတာ ...။
ကျွန်မ မှားချင်ရင်မှားမယ်လေ ... ဒီဘဝထဲမှာ ဒီစကားတွေကတော့ ဟာသတွေပဲ အကိုရယ် ...။
လှောင်တာ မဟုတ်ပါဘူးနော် ... ဒီစကားတွေကြားရတာ ဘာမှန်းမသိ အလိုလို နာကြည်းလာလို့ ...။
ဒီခေတ်ကြီးလည်း အကိုကြည့်ပါဦး ... ပေတံတွေ အများကြီးရှိရက်နဲ့ ငွေပေတံကပဲ စံတစ်ခုလိုဖြစ်နေပြီ ...။
ငွေပေတံနဲ့ တိုင်းမှ မှန်တယ်ထင်ကြတဲ့ခေတ် ...။
ငွေကိုလိုချင်ကြတယ် ... ငွေကလိုလည်းလိုတယ် ... ဒီလိုနဲ့ပဲ ငွေရှာကြတယ် ...။
သူတောင်းစားလည်း ငွေလိုချင်တာပဲ ...။ သူဌေးလည်း ငွေလိုချင်တာပဲ ...။ ကျွန်မလည်း ငွေလိုချင်တာပဲ ...။
ဒီတော့လည်း ငွေဆိုတာ ရှာရတော့တာပေါ့ ...။ လူမှန်ရင် ဒီတစ်ချက်တော့ လာတူကြတာချည်းပါပဲ အကိုရယ် ...။
ဟင်း ... ... ... မတူတာက ဘယ်လိုရှာကြလည်းဆိုတာပဲ ထင်ပါတယ် ...။
ကျွန်မ စဉ်းစားတယ် အကိုရယ် ... ပြည့်တန်ဆာရတဲ့ငွေ သန့်မသန့်ပေါ့ ...။
အချိန်ရတိုင်း စဉ်းစားမိတယ် ... သေသေချာချာ သုံးသပ်တယ် ...။
ဒါပေမယ့် ကျွန်မ အာမခံရဲတယ် အကို ... ကျွန်မရဲ့ ငွေတွေက သန့်ရှင်းတယ် ...။
ဒီငွေတွေဟာလေ ... ဘယ်သူ့ဆီကမှလည်း မခိုးထားဘူး ... အဓမ္မသိမ်းပိုက်ထားတာလည်းမဟုတ်ဖူး ...
ကလိမ်ကကျစ်ကျပြီး ရထားတဲ့ငွေတွေလည်း မဟုတ်ဖူး ...
ကျွန်မတို့ရဲ့ ငွေတွေဟာ ရောင်းသူဝယ်သူ ကြည်ဖြူလို့ ရလာတဲ့ငွေတွေပါ အကို ...။
ကျွန်မလက်ထဲက ငွေတွေအားလုံးအတွက် ကျွန်မ လိပ်ပြာသန့်တယ် ...။
ဒါပေမယ့် ရင်နာရတယ် ... သိပ်ခံပြင်းတယ် ... တစ်ကယ်ပေါက်ကွဲရတယ် အကိုရယ် ...။
ကျွန်မတို့ကို ဖာ ဆိုတဲ့ဘွဲ့ကြီးတပ် ... ပြည့်တန်ဆာ ဆိုတဲ့ဘွဲ့ကြီးတပ် ... ဝိုင်းနှိမ်လိုက်ကြတာများ ...
လူကို လူလို မမြင်လိုက်ကြပုံများ ... စကားလုံးအလှလှ သုံးတတ်တဲ့သူတွေ ... လူသားပီသပါလေစွ ...။
အဲဒီလူတွေ တွေ့ရင်လေ ... မျက်လုံးချင်းဆိုင် ... စူးစူးရဲရဲကြည့်ပြီး မေးလိုက်ချင်တယ် ...
ကိုယ့်လိပ်ပြာကို ကိုယ်လုံပါရဲ့လားပေါ့ ...။
ဖြစ်နိုင်ရင် ရတဲ့ငွေချင်းယှဉ်ပြီး လျှော်ဖွတ်ပြလိုက်ချင်တယ် ...။
သေချာတယ် ... ကျွန်မရှာတဲ့ ငွေတွေထဲကတော့ ...
သွေးစက်တွေ မျက်ရည်တွေ နာကျဉ်းမှုတွေ မတရားမှုတွေ ထွက်လာမှမဟုတ်ဖူး အကို ...။
ထားပါ အကိုရယ် ... တော်ပါပြီ ... အမုန်းမပွားချင်ပါဘူး ...။
ကြားဖူးနားဝ စာတစ်ကြောင်းတောင်ရှိသေးတယ် ...
ဘာတဲ့ ... "The customer is always right." ဆိုလားပဲ ...။ ဟ ဟ .. ဟ ဟ ...။
ကျွန်မတို့ဟာ ရပ်တည်ဖို့ ငွေလိုချင်ကြပေမယ့် ငွေကို မမက်မောပါဘူး ...။
ဒီငွေတွေက စားဖို့ သောက်ဖို့ ... လှဖို့ ပဖို့ ... ပြီးတော့ ကျွန်မတို့ရဲ့ ကျန်းမာရေး ... ဒါတွေအတွက် ရှာဖွေရတာတွေပါ ...။
ဆယ်သက်သုံးမကုန် ဖြုန်းမကုန်အောင် ငမ်းငမ်းတက် ရှာနေတာလည်း မဟုတ်ပါဘူး အကို ...။
ရှာဖို့ အခွင့်အရေးကလည်း မရှိဘူးလေအကိုရယ် ... မြန်မာပြည်မှာ အခွင့်အရေးဆိုတာက ကျွန်မတို့လိုလူတန်းစားနဲ့ ဘာဆိုင်တာမှတ်လို့ ...။
အခွင့်အရေးဆိုတာက အိပ်မက် ... သုံးစားလို့မရဘူး ... ငွေနဲ့လဲယူလို့မရဘူး ... မေ့ပစ်လိုက်တယ် ...။
လိုတဲ့ငွေကို ရှာတယ် ... ဒီကိုယ်ခန္ဓာနဲ့ ရင်းပြီးရှာတယ် ... သမာအာဇီဝပဲ ... ဘယ်သူငြင်းချင်လဲ ... ဘယ်သူငြင်းရဲလဲ ...။
ရတဲ့ငွေနဲ့ ကျွန်မ ရပ်တည်တယ် ... ပြီးတော့ ကျွန်မ လှူလည်းလှူပါတယ် ...။
အဲဒီလိုအခါမျိုးလေ ... ရင်ထဲမှာ တစ်မျိုးကြီးပဲ အကိုရယ် ... ပီတိဖြစ်တာလား ... ဝမ်းနည်းတာလား ... ဖေါ်မပြတတ်အောင်ပဲ ခံစားချက်က ပြင်းလွန်းတယ် ...။
မျက်ရည်တွေ အဲဒီအခါ ထိန်းမရတော့ဘူး အကိုရယ် ...။ ဘာကြောင့်မှန်း မသိဘူး ...။
ဘတ်စ်ကားမှတ်တိုင်မှာ ... ဓါတ်တိုင်အောက်မှာ ...
ဖင်လေးလှုပ် ခါးလေးနွဲ့ မျက်စပစ်ပြီး မထီတရီ ချိုအီအီလုပ်နေလို့ ...
ကျွန်မတို့တွေ ပျော်နေတယ်လို့တော့ မထင်လိုက်ပါနဲ့ ...
ပေါ့ပေါ့နေ ပေါ့ပေါ့စားဆိုပြီးတော့လည်း ... မှတ်ချက် မပေးလိုက်ပါနဲ့ အကို ...။
တစ်ကယ်တော့ ပြည့်တန်ဆာဘဝဆိုတာ ... နေ့တစ်ဓူဝ ရုန်းကန်နေရတာပါ ...။
သမာအာဇီဝ ငွေလေး ... တစ်ပဲနှစ်ပြားရဖို့ကို ... စိုးတစ်ထင့်ထင့်နဲ့ ရှာဖွေရတဲ့ ဘဝတွေပါ အကို ...။
ဘဝပေးမကောင်းခဲ့လို့ ... မရှိလို့ ... ခန္ဓာကိုယ်အသွေးအသားကို ရင်းနှီးပြီး ... ရှာဖွေစားရတဲ့သူတွေကို ...
မထင်ရင် မထင်သလို ဥပဒေကြီးကိုင်ပြီး ထောင်ထဲထည့်တာတော့ လွန်တာပေါ့အကိုရယ် ...။
ရောင်းသူ ဝယ်သူ ကြည်ဖြူ အဆင်ပြေနေတဲ့ပွဲမှာ ... ပေါများလို့ ဝယ်တဲ့သူတွေကို ဘာမှမလုပ်ပဲ ...
မရှိလို့ ရောင်းတဲ့သူကိုမှ ထောင်ထဲထည့်ကြတာ တရားသလား အကိုရယ် ... ဒါ တရားသတဲ့လား ...။
ဟားဟား ... မြန်မာ့လူ့အဖွဲ့အစည်းကို ပျက်စီးစေတယ် ဟုတ်လားအကို ...။
ရာဇဝင်ထဲမှာလည်း ကျွန်မတို့ရှိပါတယ် ... သမိုင်းမှာလည်း ကျွန်မတို့ရှိပါတယ် ...
အော် ... ဝေးတာတွေပြောလို့ လည်ကုန်ဦးမယ် ...
အခု ကမ္ဘာ့နိုင်ငံတိုင်းမှာလည်း ရှိနေတာပဲ အကို ...။ အဲဒီနိုင်ငံတွေဟာ ကျွန်မတို့လို ဖာတွေကြောင့် ပျက်စီးသွားကြပြီလား ... ဟင် ... ဖြေပါဦး ...။
မြန်မာပြည်မှာ ကျွန်မတို့လို ဖာတွေ မရှိအောင်ရှင်းချင်ရင်လည်း ...
လူတိုင်းလူတိုင်း ဖာတွေနဲ့ ကင်းအောင် ရှင်းအောင် နေလေ ...
အဲဒီ ဥပဒေဘက်တော်သားတွေကအစ ... ကင်းအောင် ရှင်းအောင် နေကြလေ ... မဟုတ်ဖူးလား အကို ...။
မလိုတစ်မျိုး လိုတစ်မျိုး ... အခုတစ်မျိုး တော်ကြာတစ်မျိုး စည်းကမ်းတွေ စီမံချက်တွေက ...
တစ်ကယ့် တစ်ကယ်တော့ ဘယ်သူ့ကိုမှအကျိုးမပြုပါဘူး ...။
လူကိုမုန်းတော့ မူကိုသုံးပြီး ကျွန်မတို့ကို ထောင်ထဲ ထည့်တယ် ...
လူကိုခင်တော့ မူကိုပြင်ပြီး ကျွန်မတို့ကို အိပ်ခန်းထဲ ထည့်တယ် ...
မျိုးစုံကို ထည့်တော့တာပဲ ကောင်းလေစွ ...။
ကျွန်မတို့ကတော့ တစ်ကယ့်ကို အခံဘက်ကချည်းပါ ...။
လုပ်တုန်းကလုပ်တော့လည်း ခံလိုက်ရတာပါပဲ ... လုပ်ချင်တာလုပ်တော့လည်း ခံလိုက်ရတာပါပဲ ...။
အော်ဟစ်ပြီး ရယ်ပစ်လိုက်ချင်တယ် ... အို အသင်လောက ... ပြည့်တန်ဆာဘဝ ဘယ်လောက်များလှလိုက်သလဲလို့ ...။
ကျွန်မက ကလိမ်စေ့ငြမ်းဆင်ပြီးပြောတာ မဟုတ်ပါဘူး ...
ဟိုး အရင့်အရင်ထည်းက ပြည့်တန်ဆာဆိုတာ ရှိပြီးသား ...။
ဒီဘက်ခေတ်ရောက်တော့ ကျွန်မတို့ကို ဖာ တွေလို့ခေါ်ကြပြန်တယ် ...။
ပြည့်တန်ဆာဆိုတာ ရှည်လို့များလား ...
ဒါမှမဟုတ် ကျွန်မတို့လူတန်းစားကို သက်သက်နှိမ်ချင်လို့လားတော့ ကျွန်မမသိဘူး ...။
ဒါပေမယ့် ... မြို့အင်္ဂါ ပြည့်အင်္ဂါထဲမှာ ကျွန်မတို့ပါတယ် ... ကျွန်မတို့မှာလည်း သမိုင်းနဲ့ ရာဇဝင်နဲ့ပါ အကို ...။
ပေထက်အက္ခရာတင်ထားတာ ... လေ့လာသူတိုင်း သိတယ် အကို ...။
အကိုက စာတွေဖတ်တော့ သိမှာပေါ့ ...
ကောင်မလေးတစ်ယောက် ... သူ့ရဲ့ ချစ်သူရည်းစား ရန်သူတွေနဲ့ တိုက်ရင်းနဲ့ သေသွားတဲ့အခါ ...
ကောင်မလေးက သူ့ချစ်သူအတွက် ကျူးကျော်သူတွေကို တော်လှန်ပစ်ချင်တယ်လေ ...
ရန်သူတွေကို ... သတ်ပစ်ချင်နေတာပေါ့ ...
ဒီလိုနဲ့ ရန်သူတွေကို ချည်းကပ်ရင်းနဲ့ အခွင့်အရေးရှာရင်းနဲ့ သူလည်း ပြည့်တန်ဆာဖြစ်သွားတယ် ...
နောက်တော့ ဆစ်ဖလစ်ရောဂါ ရလာရော ... သူက အဲဒီရောဂါကို မကုဘူး ... မွေးထားလိုက်တယ် ...
ပြီးတော့ ရန်သူတွေနဲ့ ဆက်တိုက်ဆိုသလို ဆက်ဆံတော့တာပဲ ... သူ့ရဲ့ လက်စားချေနည်းလေ ...
သူက ချောလည်းချော ဆွဲဆောင်မှုကလည်း အပြည့်ဆိုတော့ ...
အရာရှိတွေလည်း သူမှသူပဲ ဖြစ်နေတော့တာလေ ...
ဒီလိုနဲ့ သူ့ရဲ့ လူမသိသူမသိ လက်နက်နဲ့ ... ရန်သူတော်တော်များများကို ရောဂါကူးစက်စေပြီး ...
ရန်သူတွေအတွက် မရဏတံခါးကို သူကိုယ်တိုင် ကျယ်ကျယ်ဖွင့်ပေးခဲ့တယ် ...။
ဒါပေမယ့် သူ့ချစ်သူက မသေပဲ ပြန်တွေ့တဲ့အချိန်မှာတော့ ... သူက ဆေးရုံပေါ်မှာ ရောဂါကျွမ်းနေပြီ ...။
သူသတ်ခဲ့တဲ့ ရန်သူတွေ ဘယ်လောက်များလဲဆိုတာ သူ့ချစ်သူကို ပြောပြနေရှာတယ် ...။
သူဘယ်လောက်ပဲ ရန်သူတွေကို နှိမ်နင်းခဲ့ နှိမ်နင်းခဲ့ ... ... ...
ဒါပေမယ့် အကိုရယ် ... သူကလေ ... သူက ... သူ့ဘဝက ပြည့်တန်ဆာပဲ ...။
သူရဲကောင်းဖြစ်ခွင့် မရလိုက်ပါဘူး အကိုရယ် ... ချစ်သူရဲ့ စက်ဆုတ်ရွံရှာမှုတောင် ခံလိုက်ရသေးတယ် ...။
အသိအမှတ်ပြုခံရဖို့ဆိုတာတော့ ဝေလာဝေး အကိုရေ ...။
သြော်... ကျွန်မကြေကွဲရတယ် ... ပြည့်တန်ဆာဆိုတာ ဒီလိုတွေချည်းပါလားပေါ့ ...။
ဒီအကြောင်းလေးက အကိုတို့လို စာပေသမားတစ်ယောက်ပဲ ကျွန်မကိုပြောပြသွားတာ ...။
ကမ္ဘာကျော်တဲ့ ဝတ္ထုလေးတစ်ပုဒ်တဲ့ ...။
ကျွန်မဆီကို ဒီလိုလူတွေလည်း လာကြတယ်လေ အကိုရဲ့ ...။ လူတွေက အလွှာစုံပါတယ် ...။
စကားတွေ ကောင်းနေလိုက်တာနော် ...
ဒါပေမယ့် ပြောရဦးမယ် ... ကျွန်မကို ပြည့်တန်ဆာမှုနဲ့ ထောင်ချတယ် ... (၂) ခေါက်တော့ရှိပြီ ...။
စီမံချက်တွေ ဘာဘာညာညာတွေနဲ့ ... ခဏခဏ ဆွဲစိတာ မပါဘူးနော် ... ဒါ အကြီးစားကိုပြောတာ ...။
ဒီတစ်ခါတော့ ဒီကိုရောက်လာပြီ ... အဝင်မှာ ဖတ်လိုက်ရတယ် ...
အမျိုးသမီးများပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးဌာန တဲ့ ...။
ထောင်ကျတာထက်တော့ ပိုကောင်းပါတယ် ... အစိုးရဌာန သုံးခုလောက်ပေါင်းပြီး ဖွင့်ထားတာလေ ...။
တစ်ကယ်တော့ အကိုမြင်တဲ့အတိုင်းပါပဲ ... ထောင်တစ်ခုလိုပါပဲ ...။
ပြည့်တန်ဆာမှု ... ဟိုအမှု ... သည်အမှု နဲ့ ထောင်ကျတဲ့သူတွေ ဆေးစစ်တယ် ...။
HIV Positive တွေ့ရင် ဒီကိုပို့တယ် ... ... ...။
ဒီမှာက ဇာပန်းထိုး ... စက်ချုပ် ... သစ်ပင်စိုက် ... ဘာသာရေးကအစ အကုန်သင်ပေးတယ် အကို ...။
ပြီးတော့ စာလည်း သင်ပေးသေးတယ် အကို ...။
ဒါပေမယ့် ဒီမှာက ကျွန်မတို့ကို (၁) နှစ်ထက် ပိုပြီး ထားခွင့်မရှိဘူး ...။
ဒီတော့လည်း (၁) နှစ်ပြည့်သွားရင် ကျွန်မတို့ ပြန်လွှတ်ရတယ် ... ... ...။
စောစောကပြောသလိုပေါ့ ... သင်ပေးတယ်ဆိုတော့ ပညာပေါ့ အကိုရယ် ...။
ဒါပေမယ့် ကျွန်မတို့က ပြည့်တန်ဆာတွေလေ ... ပညာတတ်ဘွဲ့ရတွေမှ မဟုတ်တာ ...။
ဒီနိုင်ငံမှာ ပညာတတ် ဘွဲ့ရတွေတောင် အလုပ်လေး တစ်ခုရဖို့ အနိုင်နိုင်ရယ် ...
ဖာသည် ထောင်ကထွက်တော့ ဘာဖြစ်ဦးမှာတုန်း ... ဖာသည်ပဲပေါ့ ...။
ကျန်တဲ့သူတွေလည်း ဒီလိုပဲလေ ... ဒီကိုလာ ... ဒီကထွက် ... ဒီဘဝပဲပြန်ရောက် ...။
တစ်ကယ်တော့ စနစ်တွေကိုက အများကြီးလိုတယ် အကိုရယ် ... အခုဟာက ပြီးပြီးရော နိုင်လွန်းတယ် ...။
အခုဆိုကြည့် ... ကျွန်မက HIV Positive နဲ့ ...
ဒါပေမယ့် ကျွန်မတော့ ဒါဖြစ်နေပါပြီလို့ လျှောက်ပြောမှာမဟုတ်ဖူး အကို...။
ဒီတော့ ကျွန်မ Condom လေးတွေ အမြဲဆောင်ထားတယ် ... ဒါ အခုမှမဟုတ်ဖူးနော် ...
ကျွန်မ ဒီဘဝထဲရောက်လို့ လုပ်သက်လေးရပြီး အတွေ့အကြုံရှိလာတဲ့အခါတည်းက စပြီး ဆောင်ထားတာ ...။
နောက်တော့ အဲဒီ Condom ကိစ္စ ပြောပြဦးမယ် ... ဘယ်လောက် ခံပြင်းဖို့ကောင်းလိုက်လဲဆိုတာ ...။
အခုတော့ ကျွန်မ ... ကျန်းမာရေးကို အရင်ထက် ပိုဂရုစိုက်တယ် ...။ ကိုယ် သောက်ရမယ့်ဆေးကို ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း ဝယ်လို့ရရင်သောက်တယ် ...။
NGO တွေလား ... တစ်ခါတစ်ခါ လာတတ်ပါတယ် ... ဒါပေမယ့်အကိုရယ် ... ဆေးဝါး မလုံလောက်တာတွေ ...
ကျွန်မတို့ မသိရတဲ့ အခက်အခဲတွေ ... အို ... ပြဿနာတွေက စုံလို့ အကိုရယ် ... ဒီလိုတွေနဲ့ ဒီဘဝတွေထဲက ဘယ်လိုများ ရုန်းထွက်နိုင်ဦးမှာလဲ အကိုရယ် ...။
အမျိုးသားရေးအသွင် ... ဟုတ်လား ... စကားလုံးတွေကတော့ ခန့် .. ငြား .. ထယ် .. ဝါ .. ပါတယ် အကို ...။
ဒါပေမယ့် ထိရောက်မှုမှမရှိပဲ ... ကျွန်မတို့က အမြင်အတိုင်း ကျွန်မတို့ပဲလေ ... ပြောင်းလဲမှုမရှိ ...။
အသစ်လေးတွေတောင် ဈေးကွက်ပေါ်မှာ စီစီရီရီရယ် ...
သူတို့လေးတွေအတွက်လည်း တစ်ကယ်ပါ ... စိတ်မကောင်းဘူး ...။
ဒါပေမယ့်လည်း သင်ပေးရတာပေါ့လေ ...။
သြော် ... ဟဟ ... တစ်မျိုးမထင်ပါနဲ့ အကိုရယ် ...
ကျွန်မတို့လို မဖြစ်အောင်ပေါ့ ...
ဒီဘဝထဲရောက်နေပြီဆိုပေမယ့် ဒီထက်ဆိုးတဲ့ အခြေအနေမျိုး မဖြစ်အောင်ပေါ့ ...
ပြည့်တန်ဆာဘဝကို ပြည့်တန်ဆာပဲ ကိုယ်ချင်းစာနားလည်နိုင်တယ် အကို ...။
ဒီ့အပြင်လူ နားလည်ပါတယ် ကိုယ်ချင်းစာပါတယ်ဆိုတာ ...
ဒီဘဝထဲကလူလောက်တော့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး ... မစစ်နိုင်ပါဘူး ...။
ဟုတ်တယ် အကို ... နောက် တစ်ပတ် နှစ်ပတ်လောက်ဆို ကျွန်မကို ဒီကနေ လွှတ်ပေးတော့မယ် ...။
ဒီမှာလေ ... သိလား ... အသိုင်းအဝိုင်းကောင်းပြီး ရောက်လာတဲ့သူတွေလည်း ရှိတယ် ...။
ဟဟ ... ဝါသနာပါလို့လား ဆိုတာတော့ ... ကျွန်မလည်း နားမလည်ပါဘူး ...။
ကိုယ်ကတော့ လူငယ်ဆိုတော့ ငွေရတယ် ... ဝတ်မယ် ... စားမယ် ... ပျော်မယ်ပေါ့လေ ... ဒါနဲ့ပဲ ဒီဘဝထဲ ... ဟင်း ...။
ဟင် ... မဆင်းရဲရင် ... ပညာတတ်ရင် ဟုတ်လား အကို ...။ ဟိုမှာလေ ... သူတို့က တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူလေးတွေ ...
ဒီ့အပြင် တစ်ခြားသူတွေလည်း ရှိသေးတယ် ... မပြောတော့ပါဘူး ...။ ဟုတ်တယ်နော် ... စဉ်းစားစရာပဲ ...။ ပြီးတော့ မိန်းကလေးတိုင်း ဖြစ်မှ မဖြစ်ပဲ ...။
အဖြစ်နိုင်ဆုံးကတော့ ဆင်းရဲမွဲတေမှုကြောင့်လို့ ထင်တယ် အကို ...။
အဲ ... ရှိသေးတယ် ... မြန်မာပြည်မှာက ဈေးပေါတယ်တဲ့ ...။ အဲဒါ နိုင်ငံခြားသားတွေ ပြောပြတာ ...။
ဟုတ်တယ် အကိုရယ် ... အခုတော့ နေရာတော်တော်များများ ပွင့်လင်းလာတယ် ...။
မရှိဆင်းရဲ ပညာတတ် သမီးပျိုလေးတွေ အတွက်တော့ အရမ်းရင်လေးတယ် အကိုရယ် ...။
ပြည့်တန်ဆာဘဝ ပြည့်တန်ဆာခံစားချက်က သိပ်ပဟေဠိဆန်တယ် ...
ကိုယ့်အသိုင်းအဝိုင်း ကြီးထွားမလာစေချင်ဘူး ...
အသစ်အသစ်တွေ ရောက်မလာစေချင်ဘူး ...
ကိုယ့်လို သူများကို မဖြစ်စေချင်တဲ့စေတနာ ...။
ကျွန်မတို့ဘဝက တစ်ကယ်ကြမ်းတယ်လေ ... အခုဆို HIV Positive တောင်ပြနေပြီ ...။
Condom ကိစ္စပြောရတော့မယ် ... စောစောကပြောသလိုပဲ ... ဟိုတုန်းထဲက ကျွန်မသုံးတာပေါ့ ...။
ယောက်ျားသုံးရော မိန်းမသုံးရော နှစ်မျိုးစလုံးဆောင်ထားတယ် ...။ တစ်ချို့ကလည်း မကြိုက်ဖူးအကိုရယ် ... ဘယ်လိုပြောပြောမရဘူး ...။
ကျွန်မပြောခဲ့တဲ့ ကျားဘီလူးဆိုတာ အဲဒါမျိုးတွေလည်း ပါတာပေါ့ ...။
ပြီးတော့လေ ... သိပ်ရင်နာဖို့ကောင်းတဲ့အဖြစ် ...
ကျွန်မတို့က ကိုယ့်အလုပ်နဲ့ ကိုယ့်အသိစိတ်ဓါတ်နဲ့ Condom ကိုဆောင်ထားတယ် ...။
အဲဒီမှာ စီမံချက်နဲ့ လိုက်ဖမ်းလို့ကတော့ အဲဒီ Condom က သက်သေပဲ ... အဲဒီမှာ သွားရောပဲ ...။
ဒီမိန်းမ ဒီမှာတွေ့လား ... Condom ဆောင်ထားတယ် ... မငြင်းနဲ့ ... ဝင်ပေတော့ပဲ ...။
ကဲ ... အကို ... စဉ်းစားသာကြည့်ပေတော့ ... အဲဒါ ကျွန်မတို့ရဲ့ ဘဝပဲ ...။
စနစ်မရှိ စည်းမရှိ ... လုပ်ချင်တိုင်းလုပ်နေတဲ့တိုင်းပြည်မှာ ဖာချင်းယှဉ်ရင်တောင် ကိုယ်က ဟိုး ... အောက် ...။
သိပ်ရင်နာဖို့ကောင်းတယ် ... ... တစ်ကယ် ... ...။
တစ်ခုတော့ သတိပေးရဦးမယ် အကို ... ဗဟုသုတပါ ...။
သာမန် မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို ... မသင်္ကာလို့ စစ်လားဆေးလားလုပ်ရင် Condom တွေ့လို့ကတော့ ...
ရိုးရိုးသားသား ဆောင်ထားတဲ့သူကိုတောင် ဖမ်းလို့ရတယ်နော် ...။
ရောဂါ ကာကွယ်ရေး ပစ္စည်းကို ကိုင်ဆောင်မှုနဲ့ ဖမ်းတာ ဒီတစ်နိုင်ငံပဲ ရှိမယ် ထင်ပါရဲ့ အကိုရယ် ...။
ယောက်ျားတွေကိုင်တာကျတော့ ဘာမှမဖြစ်ဖူး ...။
အဲဒါ သတိထားဖို့ပြောတာ ...။
မြန်မာပြည်မှာ မိန်းမနဲ့ ယောက်ျား တန်းတူအခွင့်အရေးရှိတယ်ဆိုတာ ...
ဟဟ ... ဘယ်လိုပြောရမလဲပေါ့နော် ... အဲဒါတွေသာကြည့်တော့လို့ ပြောရတော့မှာပဲ ...။
ပြောရရင် အများကြီးပါပဲ အကိုရယ် ...။ မရှိလို့ လုပ်စားပါတယ်ဆိုမှ ဟိုလူကြောက်ရ ဒီလူကြောက်ရနဲ့ ...။
အသိုင်းနဲ့ အဝိုင်းနဲ့ အကာအကွယ်နဲ့ လုပ်စားပြန်တော့လဲ ...
ကျွန်မတို့ရတာက နည်းနည်းရယ် ... ခေါင်း ဆိုတဲ့ဟာတွေကမှ ငွေရများသေးတယ် ...။
သူတို့ကလည်း သူတို့ဆင်ခြေနဲ့ သူတို့ ... လိုင်းကြေးတွေ ဘာတွေနဲ့ပေါ့ အကိုရယ် ... သိတယ်မဟုတ်လား ...။
ဟုတ် ... အကို ...။ ဒီက ပြန်ထွက်ရင် ဒါပြန်လုပ်ဦးမလားဆိုတော့ ... မလုပ်တော့ပါဘူးလို့ စဉ်းစားထားတယ် ...။
စုဆောင်းထားတာလေးတွေနဲ့ ရပ်တည်ကြည့်မယ် ...။
လုပ်ဖေါ်ကိုင်ဖက်တွေနဲ့လည်း တိုင်ပင်မှာပေါ့ ... သူတို့လည်း ဘယ်သူမှ ဒီဘဝကြီးကို တပ်မက်နေတာမှမဟုတ်ပဲလေ ...။
အကယ်၍များပေါ့ ... ဒီလောကထဲ ပြန်ရောက်သွားရင်လည်း ... အလုပ်လုပ်ရင် စည်းကမ်းပိုပြီးတော့ ထားရတော့မယ် ...။
Condom ကိုတော့ မဖြစ်မနေ သုံးမှရတော့မယ် ... ကျွန်မက ကိစ္စမရှိတော့ဘူးလေ ... ထမင်းရှင်တွေက အရေးကြီးတယ် ...။
စောစောက ပြောပြတဲ့အထဲကလို ... ရန်သူတွေနဲ့ ဆက်ဆံနေတာလည်း မဟုတ်ဖူး ...။ ကိုယ့်ကြောင့် သူများကို ဒုက္ခမရောက်စေချင်ဘူး ...။
ကျွန်မ ဒီထက် သတ္တိရှိလာရင်တော့ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ကြေငြာလိုက်မယ် ...။ ဒါပါပဲ အကို ...။
ဟုတ် ... ဘာပြောချင်သေးလဲ ... ဟုတ်လား ...။
အကိုကတော့ တစ်ကယ် နားထောင်ပေးနိုင်တဲ့သူပဲ ...။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အကိုရယ် ...။
ပြောဆိုလို့ ပြောမယ်နော် ... အခု နိုင်ငံရေး အပြောင်းအလဲတွေ ဖြစ်လာပြီ ...
တော်တော်များများ ပွင့်လင်းလွတ်လပ်တယ်ပေါ့လေ ...
ဒီတော့ ပြည့်တန်ဆာဥပဒေကို ပြန်စဉ်းစားသင့်ပြီထင်တယ် ...။
ခေတ်တိုင်း စနစ်တိုင်းမှာ ပြည့်တန်ဆာဆိုတာ ရှိနေမှာပဲ အကို ...။
လုံးဝ အမြစ်ပြတ်နှိမ်နင်းနိုင်ရင်တော့ ကျွန်မတို့လည်း ကြိုဆိုမှာပါ ...။
ဒီလိုမှ မလုပ်နိုင်သေးရင်တော့ ... ပြည့်တန်ဆာဥပဒေကို ပြင်သင့်တာတွေ ပြင် ...
စည်းကမ်းရှိရှိ ... စနစ်ကျကျ ... ဆေးစစ်တာတွေ ... မှတ်ပုံတင်တာတွေ လုပ်သင့်ပြီထင်တယ် အကို ...။
ပြည့်တန်ဆာတွေကို စောင့်ရှောက်နိုင်အောင် တရားဝင် မှတ်ပုံတင်ခိုင်းဖို့ လိုပါပြီ ...။
ဥပဒေဆိုတာ နိုင်ငံသားတွေရဲ့ အသက် အိုးအိမ် စည်းစိမ်ကို ကာကွယ်ဖို့လေ ...
ဒီအတိုင်းပဲ ဖြစ်ရမှာမဟုတ်လား အကို ...
အဲဒီလိုမဟုတ်ပဲ ဥပဒေဆိုတာ နိုင်ငံသားတွေကို ပါးပါးလှီး နားရင်းတီးပြီး ထောင်ချောက်ဆင်ဖို့ ဗျင်းဖို့ဆိုရင်တော့ ...
အကိုပြောပြောနေသလိုပဲ ... အဲဒါ ဥပဒေမဟုတ်တော့ဘူး ... တရားဥပဒေလို့ မခေါ်တွင်နိုင်တော့ဘူး ...
ကျွန်မ မဏ္ဍပ်တိုင်တက်တာ မဟုတ်ဖူးနော် အကို ... ဒီကိစ္စကို ကျဉ်းကျဉ်းလေး မတွေးစေချင်ဘူး ...။
လူတွေကို အမြင်မကျဉ်းစေချင်ဘူး ...။
သေသေချာချာ စဉ်းစားကြည့်ပါ ... ကျွန်မတို့လည်း မြန်မာနိုင်ငံသားတွေပါ ...
တရားဥပဒေရဲ့ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုအောက်မှာ ရှိကိုရှိသင့်တယ် ...။ ဟုတ်တယ် မဟုတ်လား အကို ...။
ဒီလိုလုပ်တော့မှ နောက်ဆက်တွဲ ပြဿနာ တော်တော်များများကို ဖြစ်မလာအောင် တားဆီးနိုင်မှာ ...။
ဆေးစစ်တာတွေလည်း မှန်မှန်ကန်ကန်လုပ်ပြီး မှတ်တမ်းမှတ်ရာတွေ ပြုစုထားစေချင်ပြီ ...။
ရောဂါရှိမရှိဆိုတာ ဘယ်သူမှ အမြင်နဲ့ ဆုံးဖြတ်လို့ မရဘူးလေ ... ဟုတ်တယ်မလားအကို ...။
ကျွန်မတောင် ရောဂါရှိတဲ့အကြောင်းပြောလိုက်တော့ အကို အံသြသွားတယ်မလား ...။
အပြင်မှာတွေ့ရင်တောင် သူသူကိုယ်ကိုယ် ခွဲမရဘူးလေ ...
ကျွန်မတို့လို တစ်ကိုယ်ရေ သန့်ရှင်းရေးကအစ ခြေဆုံးခေါင်းဆုံး ဂရုစိုက်တဲ့သူတွေဆို ... အမြင်အတိုင်းပဲ လန်းနေတာပဲ မဟုတ်လား ...။
အဲဒါပဲ အကို ... ဒီကထွက်ပြီး ဒီဘဝထဲရောက်မယ့်သူ ဘယ်လောက်ရှိမလဲ ...
ကျွန်မလည်း မခန့်မှန်းနိုင်ဘူး ... အကိုလည်း မခန့်မှန်းနိုင်ဘူး ... သိပ်ကြောက်စရာကောင်းတယ် ...။
စည်းနဲ့ စနစ်နဲ့ သေသေချာချာ လုပ်ပေးပါလို့ပဲ ကျွန်မ တောင်းဆိုချင်တယ် အကိုရယ် ...။
ဟဟဟ ... အကိုရယ် ... ကျွန်မရုပ်ရည်နဲ့ ယောက်ျားကောင်းတစ်ယောက် ရနိုင်တယ်တဲ့လား ...။
တစ်ထောင်မှာ တစ်ယောက် ကောင်းကောင်းဆွဲထုတ်ပြီး တည်တည်တံ့တံ့ ပေါင်းသင်းနိုင်သတဲ့လား ...။
အကိုကလေ ... စိတ်ကူးသိပ်ယဉ်တတ်တာပဲ ... ကျွန်မက ပြည့်တန်ဆာပေမယ့် မိန်းကလေးပါအကိုရယ် ...။
ပိုပြီး စိတ်ကူးယဉ်တတ်တာပေါ့ ...။
ဒါပေမယ့် ... ဒီအချိန်မှာ ဒါမျိုးပြောရတာ ရယ်စရာကြီးပါနော် ...။
ကျွန်မ ယောက်ျားတွေ အများကြီး ရခဲ့ပြီးပြီပဲ အကိုရယ် ... ... ...။
စိတ်ကူးယဉ်ဖို့ထက် လက်တွေ့ဘဝကိုရင်ဆိုင်ဖို့ ကျွန်မသတ္တိမွေးရတော့မယ် ...။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အခုလိုတွေ့ရတာ ပြောခွင့်ရတာ အတိုင်းမသိဝမ်းသာပါတယ် ...။
မြန်မာပြည်မှာ ပြည့်တန်ဆာဥပဒေ တကယ်ရှိပီး အဆိုပါကောင်မလေးတွေ အဆင်ပြေကြပါစေ။
Posted by နောင်ဂျိန် at 7:16 PM
အိမ်လမ်းရွာကြောင်း သန့်ရှင်းကြောင်း စုပေါင်းအမှိုက...
အလကားသင်ပေးသော ဘုန်းတော်ကြီးသင် ပညာရေးစနစ် ကျယ်ပြန...
ပြန်ပေး ပြန်ပေး ပြန်လျော်ပေး ငါ့ယောင်္ကျားအသက် ပြန်ေ...